Bayifuna iye kungqongqoshe eyaseVezo | News24
Bayifuna iye kungqongqoshe eyaseVezo
SEBEFUNA kungenelele umnyango kazwelonke abazali babantwana abafunda esikoleni samabanga aphansi iVezokuhle eMpumuza kulandela abathi uhide lwezinkinga ezikhungethe lesi sikole.
Lesi sikole sesibe undabizekwayo nangokusolwa ngomkhonyovu okuyinto esukumise i-South African National Civic Organisation (Sanco) ukuba iyokubika lokhu kwiSishayamthetho emasontweni amabili edlule. Izinkinga ezibhekene nalesi sikole izinga lokuhudula izinyawo kothisa njengoba kuke kwabikwa ukuthi abantwana besikole baqala ukufunda ngehora lesishagalolunye noma ligamenxe.
Yize beqala ngaleso sikhathi ukufunda kodwa baphuma kuqala kunazo zonke izikole, lokho nakho okukhathaza abazali, ngokusho komunye wabazali. Okunye okuvelile ukusolwa kwesikole ukuthi sinothishomkhulu ababili kanti omunye owesibili ubizwa “ ngesipoki sikathishomkhulu” njengoba engakaze alubhade esikoleni. Uthishomkhulu okhona njengamanje yena uyibamba likathishanhloko.
Okhulumela i-Sanco uMnu Dumisani Mthalane uthe emhlanganweni wabazali obukhona ngesonto abazali bazisiwe mayelana nalezi zinkinga..
“Ziningi izinkinga ezikhungethe isikole iVezokuhle ezidinga ukuxazululwa. Kunendaba yokuthi isikole sinaye umuntu osiza ukuhlanza isikole kodwa lokho akakwenzi. Isikole singcolile asikhombisi ukuthi ukhona umuntu omele ukwenza lokho. Okunye yindaba kagesi okubikwa ukuthi uxhunywe ngokungekho emthethweni khona esikoleni yize kodwa ugesi ube ukhokhelwa.
“Sibe ke sisekhetha amavolontiya amahlanu okuyiwona ozokwazi ukomela abazali nabebhodi lesikole (SGB) abazohlangana nothishomkhulu nothisha bese udaba ludluliselwe kungqongqoshe wezemfundo.
“Sibona kukuhle ukuthi udaba lufike kungqongqoshe,” kusho uMthalane.
Uthe ISanco Izimisele ukuthi Ilwisane nenkohlakalo ezikoleni eKZN.
“Lokhu hhayi ngoba sizokwenza sigcine esikoleni iVezokuhle kodwa sizolwisana nobugebengu ezikoleni zonke zakulesi sifundazwe. Sibona nenyunyana iSouth African Democratic Teachers Union (Sadtu) ihudula izinyawo ekulweni nale nkohlakalo kodwa sibona nayo kungathi iyakujabulela lokho. Ukwenza nje umzekelo kunothishanhloko wesikole samabanga aphansi Ivilla Maria eMaqonqo osanda kubulawa ngesihluku. Yizo zoke izinto lezi okumele zibhekwe ezikoleni,” kubeka uMthalane.
Usekela nobhala (Sadtu) eKZN uMnu Bheki Shandu uthe i-Sanco kuzomele isebenzisane nabo ekuxazululeni izinkinga ezikoleni wathi kodwa lokho kuzomele ikwenze uma isiqonda kahle imigomo i-Sadtu esebenza ngayo. Uthe akukho nkohlakalo ngokuthi osuke ewuthishanhloko aphinde asebenzele inyunyana.
“Lokho kusuke kuyisivumelwane somnyango nekomkhulu ePitoli, kusuke kungelona ichilo noma kunenkohlakalo”